नेपालमा एक दुर्लभ माछा फेला!!! – News Nepali Dainik
नेपालमा एक दुर्लभ माछा फेला!!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: १९:१३:३३
नेपालमा एक दुर्लभ माछा फेला परेको छ । प्रदेश नम्बर १ को मोरङ जिल्लामा अनौंठो माछा भेटिएको हो । यहाँको बेलबारी ६ स्थित नहरमा अनौठो प्रकारको माछा भेटिएको भन्दै स्थानिय चकित भएका छन् । सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहर अन्तर्गत सोमबारे र बनौल बिचको बिचपैनीमा बुधबार त्यस्ता २ वटा माछा देखिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
Last Updated on: March 4th, 2021 at 7:13 pm
१०७६ पटक हेरिएको